के "चपलता विकास" गर्छ? कुनै पनि कार्य को आज्ञा रोक्न छिटो - यो सबै को पहिलो, केही बिन्दुमा गर्ने क्षमता आवश्यक मोटर आन्दोलन बनाउन छ। अर्को शब्दमा, ती आन्दोलनहरु एक व्यक्ति कठिनाई सामना कुनै पनि कठिनाइ सामना गर्न मदत गर्ने - स्पष्ट पर्याप्त चाँडै सामना गर्न, र तपाईं कसरी ठीक गर्न सक्नुहुन्छ। र, को पाठ्यक्रम, मानिसको गुणस्तर तपाईं एक धेरै प्रारम्भिक उमेर बनाउन आवश्यक बुझे।
Dexterity - यो?
त्यसैले, गतिशीलता को अवधारणा संग, हामी पहिले नै निर्णय गरेका छौं। यो सहायता हामीलाई मदत गर्छ भन्ने शक्ति छ प्रगतिशील आन्दोलनहरु को समय को एक निश्चित अवधि स्थिति यो बाहिर एक बाटो पत्ता। कुनै पनि अभिभावक थाह - बच्चा बलियो र चुस्त भयो कि, यो एक धेरै युवा उमेर यी गुणहरू विकास गर्न आवश्यक छ। बल, चपलता, धीरज - तीन हरेक व्यक्ति साना को सफल भविष्यको लागि।
पनि kindergartens र विद्यालय र उच्च शिक्षा पछि पहिलो, शारीरिक शिक्षा कक्षाहरू उत्पादन डाटा गुणस्तर। सबैभन्दा सरल - एक खेल खेल, र पछि - खेल क्लब। का कुनै पनि खेल गरिरहेको सामना गरौं - बच्चा को dexterity र बलको विकास अनिवार्य हुनेछ - यो फुटबल, बास्केटबल, एथलेटिक्स, कुस्ती, पौडी छ कि छैन भनेर।
प्रारम्भिक वर्ष देखि
छोराछोरीको गतिशीलता को विकास - प्रक्रिया यसलाई पहिलो नजर मा देखिन्छ रूपमा रूपमा सरल छ। सोच्न गलत यसलाई खेल संग विशेष व्यवहार छ भने एक चतुर बच्चा, बन्न सक्नुहुन्छ।
उदाहरणका लागि लिन, सबै बच्चाहरु Trampoline द्वारा प्रेम - गतिशीलता पनि जिम्न्यास्टिक विकास गर्न योगदान। को dexterity साथै यसलाई राम्रो तरिकाले विकसित छ मोटर समन्वय। एक ठूलो भूमिका पनि स्थायी रूपमा विभिन्न आकृति मा शरीर समाधान गर्न अर्थात् क्षमता खेल्छ र statics। एउटा राम्रो उदाहरण - योग। सामान्य मा, यो, बच्चा चासोको विषय गर्न बिस्तारै स्थायी जागिर उसलाई accustom महत्त्वपूर्ण पहिलो हो। यो मोटर कौशल को आपूर्ति समय समयमा सार्थक हुनुपर्छ, वा जोडले सिक्न क्षमता कम सम्झना गर्नुपर्छ। आज गतिशीलता को धेरै प्रकार छन्।
चपलता के हो?
Dexterity फारम चार मुख्य प्रकार मा विभाजित छन्।
पहिलो - सामान्य dexterity। यसलाई कुनै पनि नयाँ मोटर अभ्यास पूरा गर्न सक्ने क्षमता implies।
दोस्रो - एक विशेष knack। अर्को शब्दमा, जबकि एक निश्चित अवस्थामा आफ्नो आन्दोलनहरु समन्वय गर्ने क्षमता। Acrobatic र hopping: विशेष knack दुई उप विभाजन गरिएको छ। Acrobatic, खेल समयमा आफूलाई रक्षा सही शट बनाउन सक्ने क्षमता केन्द्रित। Hopping बच्चा कुनै पनि समर्थन बिना शरीर नियन्त्रण गर्न सक्षम छ जो कौशल प्राप्त सामेल छन्। धेरै राम्रो, जब यो गतिशीलता को दुवै प्रकार संयोजन गर्न सम्भव छ - यो मोबाइल खेल, हुन लामो जम्प, उचाइ, गहिराइ, विभिन्न ब्यालेन्स अभ्यास वा जग्लिङ बलमा।
चपलता मोटर, बिस्तारै मानसिक मा विकास छ - तिनीहरूले अग्रणी physiologists (जस्तै, Nikolay Aleksandrovich Bernshteyn), दक्षता भन्न रूपमा। मनोवैज्ञानिक मान्छे स्थिति कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ निर्धारित छ रूपमा खडा - सही, छिटो, कुशल, संसाधन। Bernstein भनेअनुसार चपलता सीधा नियन्त्रण कार्य जोडिएको छ। यो मुख्य भूमिका यहाँ स्नायु प्रणाली द्वारा प्ले छ भन्ने हो। तर physiologist चपलता यस्तो बल, गति वा धीरज रूपमा विशेष शारीरिक गुणस्तर भनिएको छ। उहाँले यो गुण को शारीरिक र मनोवैज्ञानिक पक्षहरू आपसमा लगभग बराबर छन् भनेर सोच्न लगाइदिए थियो।
उमेर - एक रोकावट छैन?
कौशल (आफ्नो शिखर) को प्राकृतिक विकास वरिष्ठ मा पतन पूर्वप्राथमिक उमेर। यो अवधिमा सबैभन्दा आधारभूत भौतिक क्षमता विकास लागि अनुकूल छ। को ठूलो महत्व व्यायाम जटिलता को एक किसिम संग क्रमबद्घ कक्षाहरू प्ले छ।
त्यसैले, माथिका सबै आधारित, हामी निश्चय साथ भन्न सक्छौं कि चपलता - एक जटिल psychomotor क्षमता, मोटर अनुभव गठन को सूचक एक प्रकारको। विशेषज्ञहरु शारीरिक शिक्षा को अधिक जटिल आन्दोलनहरु र कार्यहरू, अधिक धेरै dexterity परिपूर्ण भन्ने विश्वास गर्छन्। र छोराछोरीले काम गर्न केही हुँदा कसरी इच्छुक प्रतिक्रिया! यहाँ सीधा श्रृंखला जान्छ - प्रयास, परिणाम सफलता को आनन्द, अझ राम्रो गर्न इच्छा छ।
चपलता खेलाडीहरूलाई खेल खेल मार्फत विकास। यो एक बास्केटबल, हुन सक्छ शटल रन, ह्यान्डबल, फुटबल र अझ थप। खेलाडीहरूलाई चपलता मा अध्ययन आधारित यसको घटक पहिचान गरिएको छ। यो मुख्यतया आन्दोलनहरु को consciously समन्वय, साथै प्राप्त कौशल र उत्पादन संकेत को प्रतिक्रिया को गति को Assimilation को गति प्रदर्शन गरिएको छ। विभिन्न कारणले आवश्यक चपलता विकास। सोचाइ, स्मृति, धारणा - यो बच्चा थप आन्दोलनहरु को नयाँ प्रकार, आफ्नो मानसिक प्रक्रियाहरू को प्रवाह मास्टर राम्रो हुनेछ सिद्ध भएको छ।
एकदम भौतिक बल को खर्च बचत - यस्तो क्षमता को उपस्थिति सामान्य राज्य मा लाभकारी प्रभाव छ। को विशेषज्ञहरु अभ्यास को किसिमहरु जोड।
पहिलो - आकस्मिक निर्देशन परिवर्तन, टेम्पो, आयाम उद्देश्य विशेष कार्यहरू - अभ्यास उच्च समन्वय उद्देश्य र अरूलाई - ती जो त्यहाँ आश्चर्य को तत्व र पूर्ण सफाया स्टिरियोटाइप आन्दोलनहरु, दोस्रो छ। सामान्य मा, यो कि पुष्ट चपलता थाहा महत्त्वपूर्ण छ - यो ज्योति व्यायाम द्वारा preceded हुनुपर्छ जो कठिन काम छ। प्रारम्भिक चरणको लागि आदर्श एथलेटिक्स मानिन्छ छ - यो खेल मा सबै मांसपेशी समूहहरु समावेश, र तिनीहरूलाई मा लोड समान र लगातार गरेको छ। तिनीहरूले भन्न रूपमा आफूलाई बस स्कूल एथलेटिक्स पछि खेलाडीहरूलाई सुरक्षित अन्य खेल मा जान सक्नुहुन्छ।
र अन्त मा
चपलता - चाँडै र सही परिवर्तन प्रतिक्रिया एक अद्वितीय मानव क्षमता। अभ्यास शो रूपमा, वास्तविक जीवन परिस्थितिमा यो गुण possessing, मान्छे कुनै पनि नकारात्मक पक्ष कम गर्न, दायाँ समाधान खोज्न छिटो छ। निष्क्रियता को वर्ष छोडेर यदि तपाईं केही महिनामा nimble बन्न सक्दैन। तपाईं अनुरूप प्रयासहरू बिना थप आशा गर्न सक्दैन। तपाईं यस द्वारा भनेर आशा, उपाय परे आफूलाई लोड गर्न सक्नुहुन्छ, र परिणाम धेरै राम्रो हुनेछ। तपाईंलाई धैर्य आवश्यक - बिस्तारै थप जटिल र समय-खपत गर्न प्राथमिक फोक्सो रोजगार बाट सार्न।
आफूलाई मा क्रमबद्घ काम मात्र, शारीरिक र मनोवैज्ञानिक दुवै, अझै पनि खडा छैन र भाग्य को नयाँ blows लिइरहेको र तिनीहरूलाई उपयुक्त rebuff दिएर सजिलो संग अगाडी सार्न। बल, चपलता र धीरज - मानिस मात्र बलियो आत्माको गुणहरू।
पट्टी सिस्टम मा पुल-अप स्क्राच देखि: विशेष गरी उपकरण, शुरुआती लागि सुझावहरू
उच्च जम्प: को विधि र प्रजाति
युरोप मा मुद्रण सुरु
Ryzhov Yuriy Alekseevich: जीवनी र रूसी वैज्ञानिक को उपलब्धिहरू
जैकेट "कोलम्बिया" - सधैं पहिलो विकल्प
Shoji - यो के हो? Shoujo एनिमे विधा (रोमान्टिक कमेडी)
मुखासे लागि बोरिक एसिड: समीक्षा। प्रभाव dosing।
घर किसानहरू कस्तो प्रकारको अद्भुत प्राणी छन्?